Mushanyi wekuSaudi akaurayiwa nenzou muMurchison Falls National Park yekuUganda |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Uganda » Mushanyi wekuSaudi akaurayiwa nenzou muMurchison Falls National Park yekuUganda
Mushanyi wekuSaudi akaurayiwa nenzou muMurchison Falls National Park yekuUganda
Vakuru vepaka vakakumbira veruzhinji, kunyanya vaya vaipfuura nemunzvimbo dzakachengetedzwa kuti vangwarire uye vadzivise kuzvipinza munjodzi.
Musi waNdira 25, 2022, mumwe mufambi akatsikwa nenzou akafa Uganda's Murchison Falls National Park, ichipfuura nemupaki kuenda kuguta reArua kuWest Nile.
Chirevo chakaburitswa naBashir Hangi Uganda Wildlife Authority (UWA) Communications Manager anoverenga muchidimbu:
“Tine hurombo kuzivisa veruzhinji kuti munhu mumwe chete auraiwa nenzou muMurchison Falls National Park. Nyaya isina kunaka iyi yaitika nhasi kuma 11:00am. Mushakabvu Ayman Sayed Elshahany chizvarwa chekuSaudi Arabia, pamwe chete nevamwe vake vatatu vaaifamba nengoro yerudzi rweToyota Wish Motor Vehicle No. UBJ917 kubva kudhorobha rakavakidzana neMasindi, vachipfuura nemupaka kuenda kuArua City kuWest Nile. Vakanomira munzira mufi achibva abuda mumota. Nzou yakamupomera kuti akamuuraya ipapo. Tisuwa nechiitiko ichi, uye tinosvitsa tsitsi dzedu huru kuhama neshamwari dzemufi.”
Chiitiko chisina kunaka chakamhan’arwa kuMapurisa ePakwach uye UWA iri kushanda pamwe nemapurisa kuona kuti nyaya iyi yaferefetwa zvizere.
UWA iri kuongorora maprotocol ekuchengetedza kuchengetedza kuti adzivise kudzokorora zviitiko zvakadaro uye yakavimbisa veruzhinji kuti mapaki eUganda anoramba akachengeteka kune vese vashanyi.
Paakabvunzwa kuti afunge kuti chiitiko ichi chaigona kudzivirirwa sei Uganda Tourist Association (UTA) Mutungamiri Herbert Byaruhanga anovazve Tourism Skills Sector Chairman akataura izvi:
“Panofanira kunge paine munhu mukuru pamisuwo yese inobhadharirwa vanhu. Munhu uyu anopihwa basa rekupfupisa ani nani ari kupinda
national park. Zvingangodaro kuti kana vanhu vangoudzwa zvishoma, vanoteerera. Zvakare, panofanirwa kuve nemakamera ekumhanya kuMurchison Falls National Park. Solar power powered speed cameras aizozivisa vetraffic warden pamuzinda. Pamusuwo panofanira kuva nemapepa
iyo inofanirwa kupihwa kune wese mushanyi anopinda mupaki ”
Nzou dzemuAfrica ndidzo mhuka dzepanyika hombe paNyika, dzinorema kusvika matani matanhatu. Idzo dzakati kurei pane hama dzavo dzekuAsia uye dzinogona kuzivikanwa nenzeve dzadzo hombe dzinenge dzakaita sekondinendi yeAfrica. (Nzou dzeAsia dzine nzeve diki, dzakatenderedzwa).
Kunyange zvazvo dzakanga dzakabatanidzwa kwenguva refu sorudzi rumwe chete, masayendisiti akaona kuti chaizvoizvo kune marudzi maviri enzou dzomuAfrica—uye kuti dzose dziri mungozi yokutsakatika. Nzou dzeSavanna imhuka hombe dzinofamba mumapani esub-Saharan Africa, nepo nzou dzemusango imhuka diki dzinogara mumasango eCentral neWest Africa.
Sangano reInternational Union for the Conservation of Nature rinoti nzou dzomusango dziri mungozi uye nzou dzomusango dziri mungozi yokutsakatika.
Pane nzou dzinosvika zviuru zvishanu mukati Uganda nhasi. Ivo vanonyanya kuwanikwa munzvimbo dzeKidepo Valley, Murchison-Semliki, uye iyo Greater Virunga Landscape ine nzou dzemusango dzine hukasha zvakanyanya muKile Forest, Bwindi Impenetrable Sango uye
Gomo reRuwenzori National Park.
muzvarirwo Mapurisa ushanyi Toyota Uganda Uganda Wildlife Authority Wildlife
United Airlines inovhura zviri pamutemo Flight Academy
US inowedzera 'kutyisidzira kwekukandwa kana kurwiswa nedrone' kune UAE yekufamba kuraira
Chikuva chitsva chinotsigira chingangopihwa itsvo
Internet Algorithms Inoziviswa: Kungofanana nemasvosve
Mushandirapamwe we $35 Mutengo Cap PaInsulin Mutengo
Hotera nyowani inovhura mukati memwoyo weLA's Sunset Strip
Nzvimbo Dzakanakisa uye Dzakashata dzekutenga 'Til You Drop
Vanhu vekuCanada vakabvunza zvavanoita paWestJet's...
Zviteshi zvendege zveUS zvine nguva refu uye pfupi yekumirira
Chirevo cheKuferefeta Kwerufu paExuma kubva kuThe...
Sangano reUS State department idzva reNyevero yeKufamba...
New Istanbul kuenda kuBudapest ndege paAnadoluJet